Momba anay - Shijiazhuang Dongmei Brush Co., Ltd.
Maninona no misafidy Dongshen --- To understand Dongshen all-round manufacturing
Shijiazhuang Dongmei Brush Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 1986. Izy io dia orinasa fanaovana makiazy sy fikolokoloana borosy manaratsy miaraka amin'ny varotra / famolavolana ary famokarana. Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana karazana borosy / borosy fiharatana. Izahay dia mamokatra ho an'ny marika borosy makiazy sy haingon-tarehy manara-penitra OEM any amin'ny firenena mandroso any Eropa sy Etazonia, ary manamboatra ny famokarana ODM ho an'ny mpanjifa kely, salantsalany ary lehibe. Mpanjifa maro no manana fiaraha-miasa orinasa maharitra sy maharitra miaraka amin'ny orinasanay. Ny mpiasa matihanina amin'ny famolavolana sy ny famokarana, mifantoka amin'ny kalitao, mitazona fampanantenana ary manome serivisy manara-penitra mahomby sy haingana ny mpanjifa. Manana ny marika Dongshen izahay, ary koa patanty famolavolana maro sy fahaiza-manao matanjaka.
Miaraka amin'ny mpiasa maherin'ny 100, ny orinasan'i Dongshen Covers dia mitontaly 15.000㎡. Manana ekipa mpivarotra matihanina izahay, ekipa teknika ary ekipa mpamorona matanjaka, izay tsara amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana. Manana ny marika iraisam-pirenena Dongshen izahay. Ho fanampin'izany, manana ny marika an-tokatranonay KITTY EAR izahay, izay manampahaizana manokana amin'ny borosy makiazy ary tafiditra ao anatin'ny foto-kevitra momba ny fahasalamana. Nahazo ny fanamarinana iraisam-pirenena FSC izahay. Ireo mpivarotra efa za-draharaha, ekipa QA / QC hiantohana ny fandefasana haingana sy ny kalitao avo lenta.
Mifantoka amin'ny fikarohana indostrialy, ny fahaizan'ny fikarohana, ny fanavaozana ny fitaovana, ny fampisehoana ny mpanjifa mba hahazoana antoka ny fanohanan'ny mpanjifa mahomby manerantany.
Barber Shave, Faritra fiharatra, Fitaovana borosy makiazy, Mametraha makiazy borosy, Manaova borosy, borosy makiazy napetraka,